ကုမ္ပဏီအကြောင်း | SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD
Shining E&E ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် မိတ်ဆက်။ SHINING E&E INDUSTRIAL သည် နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ကြာ Electrical Terminal Block၊ Fuse Holder, Fuse Block, Solid State Relay (SSR) ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ ။ တောက်ပသော E&E စက်မှုလုပ်ငန်းသည် နှစ်ပေါင်း 40 ကျော် ပလပ်စတစ်ထိုးဆေး၊ သတ္တုတံဆိပ်ရိုက်ခြင်း၊ နှင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း။ ကျယ်ပြန့်သောလျှပ်စစ်ဂိတ်တုံးများ၊ fuse ကိုင်ဆောင်သူများနှင့် solid state relays SSR တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
တောက်ပသော E&E စက်မှုလုပ်ငန်း
Home ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီအကြောင်း
Shining E&E ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် မိတ်ဆက်
Shining E&E မှကြိုဆိုပါတယ်။
Terminal Blocks ထုတ်လုပ်သူ - SHINING
1978 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပလတ်စတစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်း ထုတ်ကုန် များကို အထူးပြု ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူဖြစ်သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တိုးတက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ 1992 ခုနှစ်ကတည်းက၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ GuanDong ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ပစက်ရုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နေသောလုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ SGS ISO 9001:2000 လက်မှတ်ကို 2005 ခုနှစ်ကတည်းက ချီးမြှင့် ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုကို ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး TECO၊ TAIAN၊ Wal-Mart၊ Kmart၊ Target၊ Springs နှင့် Sears ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်းနှင့် ကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းများနှင့် နက်နဲသော OEM/ODM အတွေ့အကြုံများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ . လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို မြောက်အမေရိက၊ အလယ်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အာရှ၊ သြစတြေးလျနှင့် အရှေ့ဖျားနိုင်ငံများသို့ တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် Terminal Blocks ၊ Euro Terminal Strips ၊ Fixed Terminal Blocks ၊ Double Layer Terminal Blocks ၊ Ceramic Terminal Blocks ၊ Double Row Barrier Strips ၊ Single Row Barrier Strips ၊ Power Blocks ၊ Fuse Holders ၊ Fuse Blocks များ ၊ Solid State Relay များ ၊ Relay sockets များ ၊ Insulator များ ၊ Switch များ ၊ Heat Sinks နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ. ဤအတောအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိမှိုများကို ဒီဇိုင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလည်း လက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားထုတ်ကုန်လိုင်းများတွင် ကန့်လန့်ကာအမိုးအကာများ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့် နောက်ဆုံးပစ္စည်းများ၊ ဝါးကြမ်းခင်းများ၊ တံဆိပ်ရိုက်သေနတ်များ၊ မှုတ်သေနတ်များ၊ ပလပ်စတစ်စုတ်တံများ၊ အမျိုးမျိုးသော ဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့် ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်ပါသည်။
အရည်အသွေး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ရိုးသားမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အပြိုင်အဆိုင်ဆုံးစျေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ကျေနပ်စေမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ကာ သင်နှင့်အတူ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ယူဆောင်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အလွန်စိတ်ပါဝင်စားပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ "ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာအတွက် အလုပ်လုပ်ပါ" သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဒီကမ္ဘာကြီး ပိုလုံခြုံပြီး ပိုကောင်းလာဖို့ လေးလေးနက်နက် မျှော်လင့်ပါတယ်။
။ terminal လုပ်ကွက် ။ Fuse ကိုင်ဆောင်သူများ ။ Fuse Blocks များ ။ Solid State Relay (SSR)